Thenga i-Premium ye-CBD powder kunye nomzi mveliso weoyile osemthethweni
I-CBD ifumene umkhondo kutsha nje, ngakumbi kubantu abancinci. Phantse iipesenti ezingama-20 zabantu abaphakathi kweminyaka eli-18 ukuya kwiminyaka engama-29 basebenzisa uhlobo oluthile lwe-CBD, ngelixa ziipesenti ezisi-8 zabantu abangaphezu kweminyaka engama-65 ubudala abasebenzisa i-CBD. Abantu abadala abaphakathi sele beqalisile ukubamba abantu abancinci kunye neepesenti ezingama-30 zeli qela leminyaka zithatha inxaxheba ekusetyenzisweni kwe-CBD, nokuba kukwioyile, kumgubo okanye kwifom yokutshiza.
Uninzi lwabasebenzisi bathi basebenzise le mveliso ukukwazi kwayo ukunciphisa iintlungu kunye nokunciphisa iimpawu zoxinzelelo kunye nokunye ukuphazamiseka kwemood njengoxinzelelo. Ukusetyenziswa kwe-CBD kuye kwanda emva kokutshintsha kwemeko yentsangu, engafaniyo ne-CBD. Nangona kunjalo, ukuba semthethweni kwentsangu kuncede ekususeni ibala ekusetyenzisweni kwayo kunye nokusetyenziswa kwee-cannabinoids ezifumaneka kwisityalo ngokwaso.
Yintoni i I-CBD (iCannabidiol)?
I-Cannabidiol okanye i-CBD yi-phytocannabinoid ethathwe kwizityalo ze-cannabis kwaye yenye yezona zinto ziphambili kwisityalo se-marijuana, kunye nesityalo somzala wayo, i-hemp ebanika iziphumo zokuphelisa iintlungu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-cannabidiol ikhutshwe kwisityalo se-hemp, esikudidi lwezityalo ze-cannabis kodwa ayisiyiyo le nto kuthiwa ngumya. Njengoko ikhutshwe kwisityalo se-hemp, ayinayo nayiphi na into ebangela ukuba ingakwazi ukwenza abantu 'baphakame'.
Isityalo se-Cannabis sativa, ngokukodwa, isityalo se-marijuana sinako ukwenza abantu bazive bephezulu ngenxa ye-Delta-9-tetrahydrocannabinol okanye i-THC, enye i-phytocannabinoid evela kwizityalo ze-cannabis. Intsangu inexinaniso ephezulu ye-THC kunezinye izityalo ze-cannabis ezifana ne-hemp yiyo loo nto ineempawu ezizezengqondo phakathi kwazo zonke ezinye izityalo. I-CBD ifunyenwe kwisityalo se-hemp esityebileyo kwi-CBD kodwa iqulethe i-THC encinci, iyenza ukhetho olufanelekileyo kubantu abanqwenela ukufumana izibonelelo zesityalo se-Cannabis sativa ngaphandle kweziphumo zengqondo.
Iziphumo ze-CBD kunye ne-THC ziyafana kwithiyori yokuba zombini zichaphazela iikhemikhali ezahlukeneyo okanye ii-neurotransmitters kwingqondo kodwa ikhompawundi nganye ye-cannabinoid ichaphazela iikhemikhali ezahlukeneyo kwaye inefuthe elahlukileyo kubo, yiyo loo nto ivelisa iziphumo ezahlukeneyo.
I-Cannabidiol yafunyanwa ekuqaleni ngo-1940 njenge-phytocannabinoid engeyiyo-psychoactive kwizityalo ze-cannabis kodwa kwada kwada ngo-2018 apho i-USA yayisusa, kunye nesityalo sayo somzali, i-hemp, ukusuka kuLuhlu lweZinto ezilawulwayo. Nangona kunjalo, akukho semthethweni ukuba abantu basebenzise i-cannabidiol powders, ii-oyile ze-CBD, okanye ezinye iimveliso ze-CBD kwifomu yabo emsulwa okanye nakuphi na ukwenziwa njengonyango olunokubakho okanye isithako kwisongezo sokutya.
Amayeza e-CBD avunyiwe nguLawulo lokutya kunye noLawulo lweziyobisi okanye i-FDA e-United States of America kunyango lwesifo sokuwa kunye nokuphazamiseka. Kukwacetyiswa neminye imiba yezonyango nangona kunjalo, kusafuneka ukuba kufunyanwe imvume ye-FDA kunye namanye amazwe 'ngaphambi kokuba ibe ngumgangatho wokhathalelo.
Isebenza njani i-CBD kuMzimba?
Ngapha koko, iingcali bezixoxa ngesihloko esithi "isebenza njani i-CBD emzimbeni womntu" iminyaka emininzi. Kubonakala ngathi ifunyenwe ingxoxo efanelekileyo. Izazinzulu zikholelwa ukuba i-CBD isebenza ngokungangqalanga kwinkqubo ye-endocannabinoid ukuze ikhuphe izibonelelo zayo. Ngaphambi kokuba siqonde indlela i-CBD esebenza ngayo emzimbeni wethu, kufuneka siqale siqonde ukuba yeyiphi inkqubo ye-endocannabinoid kwaye ikhona njani emzimbeni wethu?
Yintoni i-Endocannabinoid System (ECS)?
"I-Cannabinoid" ivela "kwi-cannabis," kwaye "i-endo" imfutshane ngokuba "yinto engapheliyo," oko kuthetha ukuba iveliswa ngokwendalo ngaphakathi komzimba wakho. Ke "i-endocannabinoid" ithetha nje izinto ezifana ne-cannabis ezenzeka ngokwendalo ngaphakathi kuthi.
I-ECS ngokwayo inamalungu amathathu:
Abamkeli (CB1, CB2) Inkqubo yemithambo-luvo kunye nomzimba wakho ojikeleze i-endocannabinoids kunye ne-cannabinoids bond nayo. (Ii-receptors ze-CB1 zikhona emzimbeni wonke, ngakumbi ebuchotsheni. . Ii-receptors ze-CB2 zixhaphake kakhulu kumajoni omzimba. Zichaphazela ukuvuvukala kunye nentlungu)
③ Iintsholongwane ezinceda ukuphula i-endocannabinoids kunye ne-cannabinoids
Ayisiyiyo kuphela i-ECS eyinxalenye yemizimba yethu, kodwa ibaluleke kakhulu. Inkqubo ye-endocannabinoid (ECS) idlala indima enomdla kwaye eyahlukileyo emzimbeni. Kwisiseko sayo, inkqubo ye-endocannabinoid yinethiwekhi enkulu ye-cannabinoid receptors ezisasazeka emzimbeni. Inkqubo ye-endocannabinoid yomntu ikhupha ii-cannabinoids ezinxibelelana nee-receptors ezifumaneka phantse kuzo zonke izicwili emzimbeni wethu. Unokuthatha i-phyto-cannabinoids (CBD) ukongeza kwezo zinto ziveliswa ngumzimba wakho ukunceda ukukhulisa le nkqubo. Indima yenkqubo ye-endocannabinoid kukuzisa ibhalansi kwizicubu zethu, kubandakanya intliziyo, ukwetyisa ukutya, i-endocrine, amajoni omzimba, uvalo kunye neenkqubo zokuzala. Ngamafutshane, kuyasebenza ukugcina ungathathi cala. Ukungathathi hlangothi kuthetha izinto ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wakho, ekunokwenzeka ukuba yenye yezona zinto zibalaseleyo malunga nekhompawundi-inokuba nefuthe elahlukileyo kwii-receptors ezahlukileyo emzimbeni wakho.
I-CBD, ngokuchaseneyo, ayisebenzi ngokwasemphefumlweni, ayizukulawula kwaye ikwenze ube likhoboka emva kokuba usebenzise iimveliso ze-CBD okanye ze-CBD. I-CBD ayitshintshi imeko yomntu xa eyisebenzisa. Nangona kunjalo, inokuvelisa utshintsho olukhulu emzimbeni, kwaye ibonisa ezinye izibonelelo zonyango ezibalulekileyo.
Oososayensi babekholelwa ukuba i-CBD iqhotyoshelwe kwii-receptors ze-CB2, kodwa izifundo ezitsha zibonise ukuba i-CBD ayinamathiseli ngqo kwi-receptor. Endaweni yoko, kukholelwa ukuba i-CBD inefuthe kwinkqubo ye-endocannabinoid ngokungathanga ngqo. Isiphumo se-CBD ngokungangqalanga kwiNkqubo ye-Endocannabinoid Xa umntu ethatha i-CBD, le khomputha ingena kwinkqubo yakho nakwinkqubo ye-endocannabinoid (ECS) .Kuba kufunyaniswe ukuba i-cannabidiol ayinabumbano, izazinzulu zikholelwa ukuba izibonelelo zonyango ze-CBD ezenziwe nge isenzo esingathanga ngqo.
I-CBD inqanda i-fatty acid amide hydrolase (FAAH), ephula i-anandamide kwaye iyenze buthathaka. I-CBD yenza buthathaka i-FAAH, ekhokelela ekunyukeni koxinzelelo lwe-anandamide. I-Anandamide ithathwa njenge- "bliss molecule" kwaye idlala indima ebalulekileyo kwisizukulwana solonwabo kunye nenkuthazo. Ukunyuka koxinzelelo lwe-anandamide kunokuba nefuthe elihle kwinkqubo ye-endocannabinoid.
I-CBD ikwachaphazela iproteni ebophayo ene-asidi (FABP). Iiproteni ze-FABP zibophelela kwi-anandamide kwaye zihambise i-enzyme ngaphandle kwe-synapse ukuba yehle kwaye ichithwe yi-FAAH. I-CBD ichaphazela inkqubo yezothutho ye-FABP ukuze i-anandamide encinci yenziwe i-metabolism, iphinde ikhokelele kuxinzelelo oluphezulu lwe-anandamide.
Okokugqibela, i-CBD iyazibophelela kwii-G-protein receptors ezibizwa ngokuba yi-TRPV-1. Ii-receptors ze-TRVP-1 ziyabandakanyeka kulawulo lweentlungu, iqondo lobushushu emzimbeni kunye nokudumba. Kungenxa yesi sibophelelo apho izazinzulu zikholelwa ukuba i-CBD iyanceda ngokudumba kunye nokuphelisa iintlungu.
Ngamagama, Inkqubo ye-endocannabinoid inceda ukugcina umzimba kwi-homeostasis. Xa ugalelile, Cannabidiol inokunceda ukwandisa amandla omzimba wethu ukuze usebenze ngokutyibilikayo. I-CBD inxibelelana ne-cannabinoid, dopamine, opioid kunye ne-serotonin receptors kwimizimba yethu, emva koko yenze imisebenzi emininzi yemizimba yethu.
Udumo kunye nokuthandwa kwe-CBD kunganxulunyaniswa nezibonelelo ezahlukeneyo ezinazo emzimbeni womntu, uninzi lwazo ezingaphandwa nje kuphela kodwa ngenxa yezi zifundo, zixhaswa bubungqina besayensi. Phambi kokumiselwa ngokusemthethweni kunye nokusetyenziswa okubanzi kwekhompawundi, iintlobo ezininzi zophando zenzelwa ukuba zingafundisi kuphela ukusetyenziswa okunokubakho kunye nezibonelelo ze-CBD kodwa kunye nokuhlalutya kunye nokuvavanya ukhuseleko kunye nobungozi obunokubakho bekhompawundi.
Izibonelelo ezininzi ze-CBD zikhankanyiwe apha ngezantsi, kunye nezifundo ezahlukeneyo ezingqine ezi zibonelelo.
Ulawulo lweNtlungu kunye noNcedo
Uninzi lwabantu luyathanda ukusebenzisa i-CBD kwesi sibonelelo ngokukodwa. Kukho iirekhodi zentsangu ezisetyenziswa njengepilisi yeentlungu, ukubuyela umva njenge-2900 BC. Izityalo ze-Cannabis zinokusebenza njengezinhlungu zeentlungu kunye nokunciphisa iintlobo ezahlukeneyo zentlungu ngenxa yesenzo sabo kwi-receptor ye-cannabinoid emzimbeni.
Umzimba womntu unenkqubo ye-endocannabinoid okanye i-ECS endaweni yokunceda kwimisebenzi ephambili efana nokulala, ukutya kunye nokuphendula komzimba. I-ECS inoxanduva lokukhululwa kwe-endo native cannabinoids ezisebenza kwi-receptor ye-cannabinoid kunye nokunciphisa iintlungu, ukuphucula impendulo yomzimba, ukukhuthaza indlala kunye nomjikelo wokulala. I-CBD kunye ne-THC zombini zii-cannabinoids ezithi xa zithathwa ngomlomo okanye ngokwezihloko, zinxibelelane kwaye zibophe kunye nee-cannabinoid receptors. Kuba ezi cannabinoids zangaphandle ziyafana ne-endo native cannabinoids, zinokuvelisa iziphumo ezifanayo nezipheleleyo, nangona iziphumo zazo zinokubaxiwe.
Kwi-2018, abaphandi benza uhlalutyo lweemeta kulo lonke uncwadi olupapashwe kwada kwangowe-2017 ngezibonelelo zokusetyenziswa kwe-cannabidiol kwizigulana ezinentlungu ye-neuropathic ngenxa yezifo ezimbi. Ishumi elinesihlanu kwezifundo ezilishumi elinesibhozo ezazibandakanyekile kolu hlalutyo lweemeta zafumanisa ukuba uninzi lwezigulana zakhululeka kwintlungu emva kokuthatha indibaniselwano ye-27mg THC kunye ne-25 mg CBD.
Ngapha koko, lonke uphononongo lufumanise ukuba iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu zale nhlanganisela yayisisicaphucaphu, umlomo owomileyo, kunye nokugabha. Ezi ziphumo bezingalindelekanga zazingekho kwisigulana ngasinye kwaye abo bachaphazelekayo babengenasabelo saneleyo. Oku kukhokelele kubaphandi ukuba bagqibe kwelokuba ukusetyenziswa kwe-THC kunye ne-CBD, kunokunyanga ngokuphakathi iintlungu ze-neuropathic kwaye kunyamezeleke kakuhle ngomngcipheko omncinci weziphumo ezibi.
Zininzi iindidi zophando eziye zenziwa ukuxhasa ukusetyenziswa kwe-CBD njengepilisi yeentlungu. Olunye lolo phando lujolise ekusetyenzisweni kwe-CBD kwiipropathi zayo zokugonywa komzimba kunye neyeza ezichasayo. Isifundo sase-Itali senziwa kwiimodeli zezilwanyana kwaye abaphandi kolu phononongo bazama ukuphucula iintlungu ezingapheliyo zokudumba kwiigundane ezisebenzisa i-CBD yomlomo. Bafumanise ukuba xa i-20 mg / kg ye-CBD yanikwa iigundane ezineentlungu ezingapheliyo, iigundane zabonisa ukwehla okukhulu kwintlungu. Kwangokunjalo, bafunda iziphumo ze-CBD kwintlungu ye-neuropathic kwiigundane ezinobungozi be-sciatic nerve kwaye nangona inokuthomalalisa iintlungu, kwafunyaniswa ukuba i-CBD iluncedo kakhulu kwizigulo ezinganyangekiyo.
Uninzi lwabantu luthatha iioyile ze-CBD okanye iipreyi okanye iipilisi zentlungu engapheliyo, kwaye sesinye sezizathu eziphambili zokuthandwa kwe-CBD kunye nentsangu. Yayiyiyo le nzuzo, phakathi kwezinye izinto, ekhokelele ekusetyenzisweni ngokubanzi kwe-CBD kunye nentsangu ekhokelela ekuqinisekiseni ukwenziwa kwezinto zombini nokususwa kwe-CBD kuLuhlu lweZinto ezilawulwayo.
♦ Unyango lwesifo sokuwa kunye nokunye ukuphazamiseka kokuthimba
Ukuxhuzula kunxulunyaniswa nesifo sokuwa kodwa ezinye iingxaki zinokuvelisa ukuxhuzula okunje ngeDravet Syndrome, iTuberous Sclerosis Syndrome, njalo njalo. Uhlobo olusulungekileyo lweemveliso ze-CBD luye lwanyanzeliswa ukuba lube neziphumo ezichasene nokuxhuzula okanye ngokuchasene nokubanjwa kodwa kwakusandula ukubakho ubungqina besayensi obuphathekayo obuxhasa le hypothesis.
Ekuqaleni, bekukho iimpikiswano malunga nokusetyenziswa kwe-CBD ngakumbi kunyango lwesifo sokuwa kunye nokunye ukuphazamiseka. Oku ikakhulu kungenxa yokuba nangona i-CBD iyi-anticonvulsant, kwiimeko ezithile ezibi, inokusebenza njenge-pro-convulsant. Nangona kunjalo, emva kokuvavanywa okungafaniyo, iimvavanyo zeklinikhi ezingenamsebenzi zenziwa, kwafunyaniswa ukuba akunjalo. I-CBD kunye ne-THC zombini zifunyenwe zininzi kwi-anticonvulsants kwindalo.
Ngenxa yezifundo ezininzi, kwafunyaniswa ukuba i-powders ye-CBD emsulwa kunye neoyile ye-hemp ye-CBD, phakathi kwezinye iimveliso ze-CBD, indawo yokunyanga kunye nokunyanga ukuxhuzula okubangelwa sisifo sokuwa, iDravet Syndrome, iTuberous Sclerosis Syndrome, kunye neLennox-Gastaut Syndrome. Ukulandela oku kufunyanisiweyo, i-GW Pharmaceuticals iphuhlise iyeza eliqukethe i-CBD ye-concentrate egama linguEpidiolex ethe yafumana imvume ye-FDA ukuba isetyenziswe njengeyeza lokuthimba.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba okwangoku akukaziwa ukuba iimveliso ze-CBD ezithengwe kubenzi abahlukeneyo be-CBD ziyasebenza njenge-Epidiolex ekulawuleni iimpawu zezi ngxaki zokuthimba. Oku kungenxa yokuba ayingabo bonke abavelisi bomgubo we-CBD kunye nabanikezeli bomgubo we-CBD ababonelela ngeyona powders, imveliso ye-CBD emsulwa kunye neemveliso kodwa kuneemveliso ezingcolileyo ezingagxili, kungoko, zingasebenzi. Kubaluleke kakhulu ekuthengeni kuphela kubathengisi abaqinisekisiweyo abathengisa imveliso ekumgangatho ophezulu, necocekileyo ye-CBD.
Abaphandi ngoku bazama ukuvavanya ukusetyenziswa kwe-CBD kunye ne-THC kunye okanye ukusetyenziswa kwe-CBD kuphela ekulawuleni nasekunyangeni ukuxhuzula okunganyangekiyo, njengoko zisisisongelo esikhulu kubomi babaguli kwaye zihlala zixanduva lomgangatho wobomi owehle kakhulu.
Oda i-CBD Powder kunye neeoyile ngoku!
Ukunciphisa uxhalaba kunye noxinzelelo
Ukusetyenziswa kwe-cannabidiol kubonisiwe ukuba neziphumo ze-anxiolytic kunye ne-anti-depressant kwiimodeli ezininzi zezilwanyana. Kwisifundo saseBrazil esenziwe kwiimpuku, kwafunyaniswa ukuba i-CBD ineziphumo ezifanayo ne-imipramine, into eyaziwayo yokulwa nokudakumba kwihippocampus yeempuku ezixinezelekileyo. Uphononongo lwenziwe ukuvavanya iziphumo ze-cannabidiol kuxinzelelo kunye nokuvavanya ukuba i-CBD ingazivelisa njani ezo ziphumo.
Kwafunyanwa ngabaphandi ukuba i-CBD isebenze kwii-serotonin receptors, ngakumbi ii-5HT-1A receptors ukuvelisa iziphumo ezichasayo. Kwafunyaniswa ukuba, ukuze i-CBD isebenze, ukwenziwa kwe-BDNF okanye i-Brain-derived neurotrophic factor kwakufuneka.
Nangona kunjalo, olu phononongo lujolise kwiziphumo ze-CBD kwiimodeli zezilwanyana kwaye iziphumo ezifanayo azinyanzelekanga ukuba ziveliswe nasebantwini. Yiyo loo nto isifundo senziwe kuma-57 aphilileyo, amadoda amadala ukuvavanya ukuba ngaba i-CBD ine-anxiolytic kunye ne-anti-depressant nasebantwini. Kolu vavanyo lwaseBrazil olungaboniyo kabini, olungenamkhethe, ukusetyenziswa kwe-CBD kwavavanywa kuthelekiswa ne-placebo ukuvavanya iziphumo kwaye kwafunyaniswa ukuba iziphumo ze-CBD kwizilwanyana zixeliswa nakubantu. Oku kuthetha ukuba ukusetyenziswa kwe-CBD kunakho ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo ebantwini.
Ioyile ze-Cannabidiol kunye ne-powders ikwakholelwa ukuba idlala indima enkulu kunyango kunye nolawulo lwexhala labantwana kunye nokuphazamiseka kwe-PTSD, njengoko kucetyisiwe yingxelo yetyala epapashwe ngoogqirha kwiYunivesithi yaseColorado.
Lawula iimpawu ezinxulumene nomhlaza
Umhlaza kunye nonyango lomhlaza zihlala zivelisa iimpawu ezingangqalanga ezifana nesicaphucaphu, ukugabha kunye neentlungu. Ezi mpawu kunzima ukuzilawula ingakumbi njengoko ziphindaphindeka kumjikelo ngamnye wonyango lomhlaza. Nangona kunjalo, uphononongo lwakutsha nje lubonisa ukuba iimpawu ezinxulumene nomhlaza ezinje ngezo zikhankanyiwe apha ngasentla zinokulawulwa yi-CBD okanye umxube we-CBD kunye ne-THC.
Uphononongo olwenziwe e-United Kingdom kwizigulana ezili-177 lwenziwa ukuvavanya ukhuseleko kunye nokusebenza kwe-CBD kunye ne-THC yokudityaniswa njengee-analgesics ze-nonopioid kwizigulana ezinentlungu yomhlaza. Iziphumo eziphambili zophando zibonise iziphumo ezithembisayo njengoko uninzi lwezigulana ezithatha umxube we-CBD kunye ne-THC zichaze ukwehla okukhulu kwintlungu, phantse amaxesha amabini ngaphezulu kweqela le-placebo. Oku kubonisa ukusebenza kwazo zombini ii-cannabinoids ekunyangeni nasekulawuleni iintlungu kwizigulana ezinomhlaza.
Ngaphaya koko, abaphandi kwisifundo esinye bazimisele ukufumana unyamezelo lonyango olunokubakho kunyango kwizigulana ezinomhlaza njengoko uninzi lonyango lomhlaza luneziphumo ebezingalindelekanga ezininzi ezinxulumene nazo. Kwafunyaniswa ukuba i-CBD kunye ne-THC zazinyamezeleka kakuhle zizigulana kwaye indibaniselwano yayingafane ivelise naziphi na iziphumo ezibi ekufuneka zichazwe.
I-Chemotherapy lolona nyango luxhaphakileyo phantse kuzo zonke iintlobo zomhlaza kodwa ayinyamezelwa kakuhle ngumzimba womntu kwaye inokuthatha umgangatho kwimpilo. Esinye seziphumo ebezingalindelekanga eziphambili ezikhoyo phantse kuzo zonke izigulana ezinyangelwa ichemotherapy yichemotherapy-induse nausea kunye nokugabha okanye i-CINV. Nangona kukho amayeza amaninzi e-antiemetic, amanye awo ngokukodwa kwi-CINV, ahlala esebenza. Nangona kunjalo, uphando olwenziwe e-Barcelona lufumanise ukuba ukusetyenziswa kwe-CBD kunokunceda ekuthomalaliseni abaguli abane-CINV ngokusebenza okuphezulu kunamayeza e-antiemetic ayilelwe i-CINV.
Ert Iimpawu zeNeuroprotective
I-CBD inezibonelelo ezininzi ngokuchasene nokuphazamiseka kwemithambo-luvo apho ijolise kwii-receptors ze-neurotransmitter ezahlukeneyo kunye nee-cannabinoid receptors ukuvelisa ezi ziphumo zilungileyo. Iyeza le-CBD, i-Epidiolex ikwavunyiwe yi-FDA kunye nabasemagunyeni kwezempilo kwihlabathi liphela kunyango lokuxhuzula ngenxa yesifo sokuwa kunye nokunye ukuphazamiseka.
Ukunikezelwa kwezi zibonelelo, kwenziwe iindidi ezininzi zophando ukuze kufundwe isiphumo se-CBD kwezinye iingxaki zemithambo-luvo, ezinje nge-Alzheimer's kunye ne-Multiple Sclerosis.
Isifundo esenziwe eJamani sifunde iziphumo zeSativex, i-oro-mucosal CBD yokutshiza kwimisipha yokuqaqamba ebonwa kwizigulana ezine-sclerosis. Aba baguli baneengxaki zemithambo-luvo enganyangekiyo kunyango kunye ne-CBD yokutshiza, kwezi zigulana, isetyenziswe njengonyango olongezelelekileyo kunyango esele lukhona.
Kwafunyaniswa ukuba izigulana ezinengxaki yokuqinelwa yimithambo ziye zayinyamezela iSativex kwaye azinangxaki ngenxa yokusetyenziswa kweSativex. Ngapha koko, abasebenzisi beSativex baxele ukwehla okubonakalayo kokuqaqamba kwemisipha kunye neentlungu, nezikhokelele ekubeni abaphandi bacebise ukusetyenziswa kweoyile ye-CBD, umgubo, kunye nokutshiza kwizigulana ezinesiphene kunye nokudumba kwemisipha ngenxa ye-MS.
Olunye uphononongo olwenziwe ukujonga iziphumo ze-CBD kwizigulana ze-Alzheimers lukwabonakalise iziphumo ezithembisayo, kungoko kungqina ukuba i-CBD inayo iipropathi zokukhusela. Okwangoku, isifo i-Alzheimer sisifo esinganyangekiyo se-neurodegenerative esithe sathi sikhona, asinakucothiswa ekuqhubekeni okanye ekuguqulweni kwaphela. Nangona kunjalo, iziphumo ze-vitro ze-CBD kwiiseli zobuchopho zibonisa umfanekiso omtsha kwaye zinika ithemba kwizigulana ezinesifo se-Alzheimer's.
Ukuphuhlisa le ithiyori eyenziweyo kwiziphumo ze-in vitro ze-CBD, uphononongo lwenziwe kwiimodeli zezilwanyana ukubona ukuba i-Alzheimer's inokubuyiselwa umva kunyango lwe-CBD. Iimpuku ezinesiphene sokuqonda kunye ne-gliosis, uhlobo lokuyilwa kwesibetho kwingqondo, ngenxa ye-Alzheimer's yanikwa i-CBD njengenxalenye yolu phononongo. Kwafunyaniswa ukuba i-CBD inciphise ukwakheka kwebala kwingqondo kwaye ikhokelela kwi-neurogeneis okanye ukukhula kweeseli zobuchopho ezintsha ukulwa nelahleko yeeseli ngenxa ye-gliosis esebenzayo. Ngaphaya koko, i-CBD yafunyanwa ibuyisela umva ukusilela kwengqondo okubonwe kwiimodeli zeerat, yiyo loo nto inika ithemba lokuba i-Alzheimer's inokuphinda ibuye inyange, kwikamva.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uninzi lwezi ziphumo zaveliswa kwiimodeli zezilwanyana kwaye ezi ziphumo kufuneka ziphindaphindwe kuvavanyo lweklinikhi ngezifundo zabantu ngaphambi kokuba ukusetyenziswa kwe-CBD kube ngumgangatho wokhathalelo.
Management Ulawulo lwamachaphaza kunye noNyango
I-CBD ifumene ukubambeka ngenxa ye-analgesic, anxiolytic, kunye nepropathi yokuthintela ukudumba. Zizinto ezichasayo ezichasayo zokukhokelela ekusebenziseni kwayo njengonyango lwe-acne. Amabala akholelwa ekubeni sisiphumo sokudumba, ibhaktiriya kunye nemveliso engaphezulu kwe-sebum. Kuphononongo olwenziwe kuvavanyo lwepropathi yeoyile ye-CBD, kwafunyaniswa ukuba i-CBD ithintela ukuvuvukala kwaye ngenxa yoko ukukhula kwe-cystic, ukudumba kwamabala ngokuthintela ukugcinwa kweeprotein ezivuthayo ezikhulayo kulusu. Ngaphaya koko, olu phononongo lufumanise ukuba i-CBD inokuwatshintsha amanqanaba e-sebum eluswini ngokujolisa kwimveliso yayo kunye nokunciphisa ngokuthe ngqo.
I-CBD okwangoku isetyenziswa kwiimveliso ezininzi zolusu kunye neearhente zemixholo ezibhengezwa njengeemveliso ezichasene namabala. Nangona kunjalo, kubalulekile ukufumana iimveliso ezinohlobo oluthile lobuchwephesha bokunceda imveliso ingene kulusu lomntu. Oku kukuqinisekisa ukuba ingena esikhumbeni kwaye inciphise ukudumba okuvela ngaphakathi.
Ert Iipropathi ze-Antipsychotic
I-CBD isetyenziswa ngokubanzi kubuchule bayo bokulawula iingxaki ze-neuropsychiatric, yiyo loo nto kusenziwa iintlobo ezahlukeneyo zophando kwezinye iziphumo ezinokubakho ze-CBD. Kwaye uninzi lwezi zifundo lubonise impendulo elungileyo.
Ukusetyenziswa kwe-Cannabis kukholelwa ukuba ngoku kukhokelela kuphuhliso lwe-schizophrenia, isifo esinganyangekiyo se-neurological esineempawu ezinje ngengqondo. Izifundo ezitsha ziye zacinga ukuba ukusetyenziswa kwe-CBD kunokuba luncedo ekulawuleni nasekuchaseni i-psychosis ebonwe yi-schizophrenia, ethi ikhule ngenxa yokusetyenziswa kwe-cannabis, kunye naleyo ikhula njengesiphumo sempembelelo yemfuza, ngaphandle kokubandakanyeka kwi-cannabis. Inokubuyisa kwakhona i-psychosis ngamanye amaxesha ebonwa ngolawulo olungqongqo lwe-THC.
Ezi ziphumo zingqina ukuba i-CBD ineempawu zokuthintela ukungafuneki kwengqondo ezifuna ukuphinda zivavanywe njengoko ezi zibonelelo zinokuba nexabiso elikhulu kunyango.
♦ Unyango kunye noLawulo lokuSetyenziswa gwenxa kweziyobisi
Ukuphazamiseka okuluthayo kuphuhliswa ngenxa yesenzo samachiza kwimijikelezo ye-neuronal, eyenza abantu banqwenele kwaye baxhomekeke kula machiza. Kuphononongo loncwadi olwenziwe ngabaphandi ukuvavanya ukusetyenziswa kwe-CBD njengonyango olunokubakho kwizifo ezichasayo, kwafunyaniswa ukuba i-CBD inokukwazi ukunxibelelana nezijikelezo ze-neuronal kwaye ziyithintele, zikhokelele ekunciphiseni umnqweno nokuxhomekeka kwezi mveliso.
Ukuphononongwa koncwadi kubandakanya izifundo ze-14, i-9 yazo zenziwa kwiimodeli zezilwanyana, ngakumbi iimpuku. I-CBD yafunyanwa iluncedo ngokukodwa ngokuchasene neopioids, icocaine, psychostimulant, icuba, kunye neziyobisi ze-cannabis. Nangona kunjalo, ezo yayiziziphumo zokuqala kwaye ezinye iziphumo kusafuneka zipapashwe ngaphambi kokuba iziphumo zamkelwe ngokubanzi.
Isifo seswekile yingxaki enkulu echaphazela inani elikhulu labemi behlabathi. Uphononongo lwamva nje oluqhutywa kwiimodeli zezilwanyana lufumanise ukuba ukusetyenziswa kwe-CBD kwiimpuku ezingekho ukutyeba kunokwehlisa kakhulu imeko yesifo seswekile. Kolu phando, phakathi kweqela elingenelelayo kunye neqela le-placebo, kuye kwakho ukwehla okuphawulekayo kwizigulo zesifo seswekile ukusuka kwiipesenti ezingama-86 ukuya kwiipesenti ezingama-30.
Ngaphaya koko, olu phononongo lufumanise ukuba ukusetyenziswa kwe-CBD kunokubangela ukwehla kwesifo seswekile ngenxa yeepropathi ezichasene nokuvuvukala kunye neziphumo ze-immunomodulatory ze-cannabinoid. Ukusetyenziswa kwe-CBD kwezi ndlela zezilwanyana nako kukhokelele ekulibazisekeni kokuqalisa kwe-insulitis eyonakalisayo, enye yeendlela eziphambili ezinoxanduva lokunciphisa i-insulin kwisifo seswekile.
I-CBD yindawo ekhoyo ngokubanzi ekwafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ukwenza yonke inkqubo yesicelo kube lula kubasebenzisi. Ezona ndlela zixhaphakileyo zokufaka okanye ukusebenzisa i-CBD zibandakanya, kodwa azikhawulelwanga:
→ I-CBD yezihloko zeendaba
Ezi arhente zihloko ziqulathe i-CBD kwaye zisetyenziselwa ukulawulwa kwentlungu, ukudumba, ukudumba, isikhumba kunye ne-acne. Izithambiso ze-CBD kufuneka zisetyenziswe njengayo nayiphi na enye imveliso yolusu kwaye zifakwe kwinxalenye yesikhumba efuna unyango.
Xa uthenga ii-CBD kunye nezithambiso, kubalulekile ukuba uthenge imveliso ene-nanotechnology okanye i-micellization evumela ukuba izithako ze-arhente ye-topical, njenge-CBD, ifunxwe lulusu kwaye inyange ngaphakathi. Ngaphandle kwezi ndlela zokufaka amanzi endaweni, ii-arhente ze-CBD ezine-topical ziya kuhlala nje ngaphezulu kwaye zingavelisi ziphumo ziluncedo konke konke.
→ IiVapes ze-CBD
I-CBD xa iphefumlelwe nge-vaping ivumela i-CBD ukuba ifunxwe ngokukhawuleza emzimbeni, kwaye ivelise izibonelelo ngokukhawuleza kunayo nayiphi na enye indlela. Kuba iphefumlelwe emiphungeni kwaye emva koko idlulela kwigazi, i-CBD kwi-vape idlula kwimetabolism yokupasa yokuqala edla ngokuthatha ixesha elide kwaye ithintela isenzo esikhawulezileyo se-CBD. Akunjalo ngemiphunga ye-CBD kwaye le ndlela yokusetyenziswa kwe-CBD idume kakhulu kubantu abancinci. Nangona i-CBD inekhosi ekhawulezileyo yesenzo xa isetyenziswa kwifom ye-vape, ikwanayo imetabolism ekhawulezileyo kwaye isegazini kuphela malunga nemizuzu eli-10, oko kuthetha ukuba ukusebenza ngokukuko kwemiphunga ye-CBD kuhlala imizuzu eli-10.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-vapes ayisiyondlela esempilweni yokusebenzisa i-CBD okanye nayiphi na imveliso. Ukuvumba kuthathwa njengokusempilweni kunokutshaya kodwa kusempilweni kwaye kufuneka kuthintelwe, ngakumbi njengoko ezinye iindlela ze-CBD zifumaneka ngokulula kwaye ziyafikeleleka.
→ Iipilisi ze-CBD kunye neepilisi
Le fomu ye-CBD yeyona ndlela ilawulwa kakhulu yokutya i-CBD kwaye ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise i-cannabidiol kwiidosi ezithile ezahlukeneyo, ngokusekwe kukhetho kunye neemfuno zabo. Umthamo oqhelekileyo weepilisi ze-CBD kunye neepilisi ziphakathi kwe-5 mg kunye ne-25 mg.
→ Ukugxila kwe-CBD
I-CBD igxila, njengoko igama lisitsho, iqulethe uhlobo lwe-CBD. Ngokomndilili, ezi mveliso ziza nesicelo kwaye ziphindwe kalikhulu ukugxila kunezinye iimveliso ze-CBD kunye neefom. Ifumaneka ngohlobo olungumgubo, le mveliso kufuneka igcinwe emlonyeni okwethutyana ngaphambi kokuba iginywe ukuvumela i-CBD ukuba ifunxwe ngokuthe gingci kunye nokupasa okokuqala emva kokuginywa.
→ Iioyile ze-CBD kunye neeTinctures
Iioyile ze-CBD kunye neetunctures ziqulathe uxinzelelo oluphezulu lwe-CBD ihlala isuka kwi-100 mg ukuya kwi-1500 mg. Njengoko ezi zisetyenziswa ngomlomo, kubalulekile ukukhangela idosi kunye nokuthintela ukugqithisa njengoko kunokonyusa umngcipheko weziphumo ezibi kunye nokunciphisa iziphumo ezilungileyo ze-CBD.
→ Ukutshiza kwe-CBD
Le fomu ye-CBD luhlobo lwesicelo esitsha kwaye, xa kuthelekiswa nezinye iifom, ineyona ndawo iphantsi ye-CBD. Umxholo oqhelekileyo we-CBD kwezi zispray ziqala ukusuka kwi-1 mg ukuya kwi-3 mg ngesipreyi ngasinye.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-CBD
I-CBD yimveliso edume kakhulu esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngabantu abadala abancinci kunye nabantu abadala. Nangona kuyinyani ukuba i-cannabidiol powder ineenzuzo ezininzi zesayensi ezihambelana nayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngezi zibonelelo, kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa ezinxulumene nokusetyenziswa kwe-CBD. Ezi ziphumo bezingalindelekanga zibonwa xa i-CBD ithathwa ngomlomo, okanye ngomlomo. Akukho phando lwaneleyo lwenziweyo ukuze bazi iziphumo ebezingalindelekanga ezinokuvela ngeefom zesicelo ezahlukeneyo.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-CBD zibandakanya:
Uxinzelelo lwegazi okanye uxinzelelo lwegazi
Umlomo owomileyo okanye iXerostomia
Uninzi lwezi ziphumo zingalunganga kwaye ziya kusombulula ngokuzenzekelayo. Iimveliso ze-CBD zinokusetyenziselwa ukuya kuthi ga kwiiveki ezili-13 ngokuqhubekekayo, kunye nedosi ekhuselekileyo ye-200mg ngosuku, i-Epidiolex inxulunyaniswa nokulimala kwesibindi okunoxinzelelo xa kuthathwe idosi ephezulu njengoko iyeza livunyiwe ukuba lisetyenziswe kumthamo ophezulu nangaphezulu kwe-200mg ngosuku , nangona kuyinto enqabileyo.
Unxibelelwano olunokubakho kunye nokuLumka okukhethekileyo kwe-CBD
I-CBD ngokubanzi ithathwa njengeyonyamezelwa kakuhle ngabaninzi kubantu abadala nabancinci-kubadala kwaye iyakwazi ukuvelisa izibonelelo ezibonakalayo kwaba bantu. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho izilumkiso ezizodwa ekufuneka zithathiwe kubantu abathile abanokuba nomdla wokuthatha i-CBD. Ezi zilumkiso zezabantu abanesifo sesibindi okanye isifo sikaParkinson. Ezi meko ziguqula ukusebenza kweemveliso ze-CBD kwaye ukhathalelo olukhethekileyo kufuneka lwenziwe zezi zigulana ukuba zikhetha ukuthatha i-CBD.
Izigulana ezinesifo sesibindi zisenokuthatha i-CBD nangona kunjalo, ziya kucelwa ukuba zithathe iidosi ezisezantsi ze-CBD, ngaphezu komntu ophakathi njengoko isibindi sabo singakwazi ukwenza imveliso kwimveliso yesiqhelo. Uphando lubonisa ukuba amanqanaba asezantsi e-CBD awachaphazeli okanye abeke uxinzelelo kwisibindi esigulayo, oko kuthetha ukuba ezi zigulana zingazithatha ngokukhuselekileyo iimveliso ze-CBD.
Izigulana ezinesifo sikaParkinson zineempawu ezibonakalayo zokuphumla ukungcangcazela kunye nokunyakaza okungalunganga kwemisipha. Ezi mpawu kukholelwa ukuba ziyabaxwa kukusetyenziswa kwe Iimveliso ze-CBDKungenxa yoko le nto abaguli bakaParkinson kufuneka bayeke ukusebenzisa nayiphi na le mveliso.
Iimveliso ze-CBD nazo azikhuthazwa kubantwana, nangona kungacaci ukuba zeziphi iziphumo ezinokuba kweli qela leminyaka. I-Epidiolex, iyeza elisetyenziselwa ukulawulwa nokunyangwa kokubanjwa, lihlala limiselwe abantwana abanengxaki yokuthimba. Ngokuka-FDA, iyeza likhuselekile ukuba lisetyenziswe ebantwaneni kodwa alaziwa ukuba lelinye Iimveliso ze-CBD zikhuselekile okanye ziyasebenza ebantwaneni. Kude kwenziwe olunye uphando, kungcono ukunqanda ukunika abantwana iimveliso ze-CBD ngaphandle kwe-Epidiolex.
Abafazi abakhulelweyo kunye nabasetyhini abancancisayo bayacelwa ukuba bathathe amanyathelo okuzikhusela kwaye bayeke ukusebenzisa iimveliso ze-CBD. Nangona kunjalo, oku akubangelwa ikakhulu ziziphumo ze-CBD, ezingaziwayo, kodwa kungenxa yokuba kunokwenzeka ukuba ezi mveliso zingangcoliswa ziityhefu okanye izinto ezinobungozi ezinokuba yingozi emfazini okanye kumntwana okhulayo. Njengoko kungenakwenzeka ukuba wonke umntu aqinisekise ngokhuseleko lweemveliso abazisebenzisayo, kungcono ukunqanda iimveliso ze-CBD xa zizonke ngeli xesha.
Ngaphandle kwamanyathelo okhuseleko achazwe apha ngasentla, akukho nto iyaziwayo malunga nokunxibelelana kweziyobisi ne-CBD.
Zeziphi iifom zeMveliso ze-CBD ezenziwe kwi-AASraw?
I-AASraw ngumthombo onokuthenjwa weepowder powders, iihormones zesini, kunye neziyobisi ezifanelekileyo. I-AASraw ikwakhona ukwahlula umenzi we-CBD kunye nomthengisi, ukuvelisa okusemgangathweni, okukhuselekileyo ukusetyenziswa, kunye neemveliso ze-CBD ezifanelekileyo. I-CBD yimveliso eguquguqukayo efumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kodwa ingengabo bonke abavelisi abenza kwaye bavelise zonke iintlobo ezahlukeneyo ze-CBD. Umzi mveliso we-CBD unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso, kwaye ayizizo zonke iifom ezinokuthi zikwazi ukugxila kumgangatho nakukhuseleko lwemveliso.
I-AASraw ngumenzi we powder ye-CBD kwaye ikwavelisa Ii-CBD, zombini ezo zithandwa kakhulu kwaye zifunwa kakhulu. Iimveliso ezenziwe yi-AASraw zibandakanya:
→ Umgubo we-CBD
I-CBD Powder okanye i-concentrate yindlela ye-cannabidiol eyenziwa ngokubanzi kwaye ithengiswe ngabantu abaninzi abazama thenga umgubo we-CBD njengoko kulula ukuyisebenzisa kwaye isebenza ngokufanelekileyo ekuveliseni iziphumo. I-AASraw inehlobo oluthile lwe-CBD powder efumanekayo yokuthengisa, eyenziwa kumveliso apho izikhokelo zokhuseleko kunye neeprotocol zilandelwa ngokuchanekileyo. Oku kuqinisekisa ukhuseleko kunye nokusebenza kweemveliso, ezi-AASraw, umenzi we-CBD powder kunye nomthengisi we-CBD powder, oqinisekisa kwaye uyaziqhayisa.
Umenzi we powder we-CBD uqinisekisa ukuba iimveliso azingcoliswanga naziphi na i-toxins okanye izinto ezinobungozi ngexesha lokuvelisa okanye ukupakishwa kwenkqubo ye-CBD. Ngaphezu koko, i-AASraw inokulawulwa okusemgangathweni kwimeko apho kwiimeko ezinqabileyo zemicimbi esemgangathweni, inceda ukulandelela nokukhumbula zonke iimveliso ezenziwe kuloo batch.
I-CBD powder eyenziwe yi-AASraw ibizwa ngokuba yi-Powder ye-CBD ene-Water-soluble kwaye imhlophe kumgubo omhlophe oqukethe i-10% ye-CBD. Le mveliso ayihlawulelwanga i-THC kwaye enye iipesenti ezingama-90 zomgubo zinamayeza kunye nezibophelelo ezinceda ukuba zigqithise kwiziphumo ze-CBD kwaye zivumele imveliso ukuba ihlale kunye kwaye ihlale ixesha elide.
I-CBD powder enyibilikayo yamanzi kufuneka ixutywe namanzi ukuvelisa isisombululo esinamandla xa kufuneka sithathwe. Isisombululo esinamandla kufuneka sixutywe kwaye sigungqiswe, esinokwenza isisombululo sibe namagwebu. Obo bubunjani obuqhelekileyo bemveliso kwaye yindlela ekufuneka ithathwe ngayo.
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba i-CBD powder kufuneka igcinwe ngokufanelekileyo, kude nelanga. Ngapha koko, nangaliphi na ixesha ukuba umgubo ungadibana neasidi okanye isiseko njengoko sinokuphendula ngomgubo.
→ Iioyile ze-CBD
Iioyile ze-CBD, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, ziindlela ezinamandla ze-CBD njengoko ziqulathe uxinzelelo oluphezulu lwe- CBD ngokuthelekiswa nezinye iifom. Iioyile ze-AASraw ze-CBD zonke zenziwe ngendlela elungileyo yokuziThengisa okanye indawo eqinisekisiweyo ye-GMP, eqinisekisa amandla kunye nokusebenza kweoyile ye-CBD. Zonke iioyile ze-CBD kunye nezinye iimveliso ezenziwe yi-AASraw zenziwe ukuqinisekisa ukuba akukho kungcoliseka kwiimveliso zazo kwaye zigxile kangangoko kunokwenzeka.
Zimbini iintlobo zeoyile ze-CBD ezenziwe yi-AASraw, njengoko kuchaziwe apha ngezantsi:
· I-hemp ebalulekileyo yeoyile
Ii-Hemp ze-CBD ziya zithandwa ngenxa yezibonelelo ezininzi zezi mveliso, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Ioyile ikakhulu zidume kakhulu kunezinye iintlobo zeemveliso ze-CBD kuba ziqulathe uxinzelelo oluphezulu lwe-CBD.
Yoncedo lweoyile ebalulekileyo ngu AASraw yi-viscous, emnyama, kunye ne-oyile etyheli egxile kakhulu kwaye izinzile. Kufuneka igcinwe kubushushu begumbi kwaye kude nelanga ukuqinisekisa ezona zibonelelo zininzi kunye nobomi obude bemveliso. Le mveliso ngumzi-mveliso we-CBD we-AASraw kuvavanywa iqela lesithathu kwaye iyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo, nokuba kungo-CBD okanye kukungabinakho ukubonwa kwe-cannabinoids.
Le mveliso i-halal, i-Kosher, kwaye ikhululekile ngokupheleleyo kwi-THC kodwa igcwele i-non-psychoactive cannabinoids yesityalo se-hemp.
· I-oyile yegolide yegolide
I-oyile yegolide ye-Hemp ngu-AASraw ngumntu wesithathu ovavanyiweyo, umgangatho ophezulu weoyile ye-cannabinoid etyebileyo kwii-cannabinoids ezigcweleyo. Le oyile imdaka ngombala omthubi namdaka ngombala ithengiswa ngeepakethe ezahlukeneyo, kwaye kunokwenzeka ukuyithenga ngokuthe ngqo kumzi-mveliso we-AASraw we-CBD ngakumbi ukuba kufuneka i-CBD ephezulu kwioyile.
Imveliso iza neengcebiso ezizodwa kugcino njengoko ukugcinwa okungafanelekanga kunokunika imveliso ingasebenzi. Kubalulekile ukuba wazi ukuba ii-cannabinoids ezikule mveliso zinokuqaqamba ngokuhamba kwexesha. Oku akuthethi ukuba imveliso ayisenakusebenziseka kodwa endaweni yoko ukufudumeza ioyile ngokuyifaka kwindawo yokuhlambela yamanzi ashushu kuya kunyibilika iikristale, ivumele ioyile ukuba isetyenziswe njengangaphambili.
Unokukhetha njani uMenzi oLungileyo weMveliso ye-CBD?
Abavelisi be-CBD abaliqela abaqinisekisa ukuba iimveliso zabo ziqulathe i-CBD emsulwa, ekumgangatho ophezulu kodwa ihlala ikude nenyaniso. Kubalulekile ukuthenga i-CBD powder kubathengisi abaqinisekisiweyo abalandela izikhokelo zokhuseleko kwaye baneendawo ezifanelekileyo zokukhangela ukuqinisekisa ukhuseleko, ukusebenza kakuhle kunye namandla emveliso.
Ngaphaya koko, kubalulekile ukuthenga umgubo we-CBD kubavelisi ababonelela ngeemveliso ezingvavanywa kuphela ngumenzi we-CBD kunye nomthengisi ngokwawo kodwa nangabantu besithathu abaqinisekisa ngakumbi umgangatho wemveliso yokugqibela ngaphambi kokuba ithunyelwe kwiimarike. isetyenziswa ngabathengi abahlukeneyo. Ukuba imveliso iyasilela kolu vavanyo lwelebhu yomntu wesithathu, kuya kufuneka icaphuke kumenzi oya kuthi emva koko avavanye ukuba kutheni imveliso isilele ukukhangela umgangatho kwaye kufuneka asombulule loo micimbi ngaphambi kokwenza iimveliso ezintsha nokuzinika.
Ngokukodwa xa uthenga i-CBD iyonke okanye ubeka ii-odolo ezininzi ze-CBD, kubalulekile ukuphanda ngemveliso kunye nomenzi wayo ukuthintela nayiphi na imiba ngemveliso yokugqibela ekhoyo kwintsalela. Ukuba kufuneka izibonelelo eziphezulu ze-CBD, kufuneka kwenziwe omnye umbuzo kumenzi ukuze kuqinisekiswe ukuba imveliso oyithengileyo ityebile kwi-CBD, kunye ne-CBD kuphela. Imveliso ayifanelanga ukuba ne-THC okanye ezinye ii-cannabinoids ezinciphisa iziphumo ze-CBD okanye ziyithintele ekusebenzeni ngokupheleleyo.
 ULucas CJ, uGalettis P, uSchneider J (ngoNovemba 2018). "I-pharmacokinetics kunye ne-pharmacodynamics ye-cannabinoids". Ijenali yaseBritane ye-Clinical Pharmacology. 84 (11): 2477–2482. ikhonkco: 10.1111 / bcp.13710. I-PMC 6177698. PMID 30001569.
 UZhang M. "Hayi, i-CBD ayisiyo 'esemthethweni kuwo onke ama-50 States". Forbes. Ibuyiswe ngoNovemba 27, 2018.
 UKlein C, uKaranges E, uSpiro A, uWong A, uSpencer J, uHuynh T, et al. (Novemba 2011). "I-Cannabidiol potentiates Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) yokuziphatha kunye nokuguqula i-THC ye-pharmacokinetics ngexesha lokunyanga okungalunganga kunye nokunganyangekiyo kwiigundane zokufikisa". Ingqondo yengqondo. 218 (2): 443-57. ikhonkco: 10.1007 / s00213-011-2342-0. IINKCUKACHA:
 Adams R, Hunt M, Clark JH (1940). "Ulwakhiwo lwe-cannabidiol, imveliso eyakhiwe yodwa kwi-marihuana ekhutshwe yi-Minnesota wild hemp". Ijenali yoMbutho weAmerican Chemical Society. 62 (1): 196–200. ikhonkco: 10.1021 / ja01858a058. ISSN 0002-7863.
 UGaoni Y, Mechoulam R (1966). "Hashish-VII Ukwenziwa isomerization kwe-cannabidiol ukuya kwi-tetrahydrocannabinols". Itetrahedron. 22 (4): 1481–1488. ikhonkco: 10.1016 / S0040-4020 (01) 99446-3
 UAbernethy A, uSchiller L (Julayi 17, 2019). "I-FDA izinikele kwisandi, Umgaqo-nkqubo osekwe kwiNzululwazi kwi-CBD". Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA). Ibuyisiwe ngo-Okthobha 17, 2019.
 UGunn L, uHaigh L (ngoJanuwari 29, 2019). "Umlindi waseBritane uthatha i-CBD njengokutya kwinoveli, efuna ukunciphisa intengiso kwintengiso yase-UK". Ukuqonda ngesondlo, i-CNS Media BV. Kugciniwe kwinto yoqobo ngoFebruwari 2, 2019. Ibuyisiwe ngoJanuwari 1, 2019.
 UArnold M (Julayi 30, 2019). "I-Sweden ijoyina i-Itali kwindlela yokuchaza imimiselo yeoyile ye-CBD". Ijenali yoShishino lweCannabis. Ibuyiswe ngoSeptemba 3, 2020.
 "Ii-cannabinoids, zikhangelwe kwikhathalogu yokutya yeNoveli ye-EU (v.1.1)". IKhomishini yaseYurophu. NgoJanuwari 1, 2019. Ibuyisiwe ngoFebruwari 1, 2019.
 Todorova S. "I-cannabis ekhulayo eBulgaria: isemthethweni kodwa isabekwa amabala". Lexology. Ibuyiswe ngoSeptemba 3, 2020.
 Isebe likaRhulumente wase-Australia lezeMpilo kuLawulo lweeMpahla zoNyango (Epreli 24, 2020). "Uthethwano: Izilungiso ezicetywayo kuMgangatho weTyhefu - Iintlanganiso ze-ACMS / ze-ACCS eziHlanganisiweyo, ngoJuni 2020". Ulawulo lweMpahla yezoNyango (TGA). Ifunyenwe ngoNovemba 25, 2020.
 "Iileta Zesilumkiso kunye Neziphumo Zovavanyo lweeMveliso eziNxulumene ne-Cannabidiol". Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA). NgoNovemba 2, 2017. Ibuyisiwe ngoJanuwari 2, 2018.
 UKogan L, uHellyer P, ukwehla R (2020). "I-Hemp Oil Extract yokuNyanga i-Canine Osteoarthritis-Related Pain: Isifundo soMqhubi wenqwelo moya". Ijenali yoMbutho wezoNyango lweZilwanyana waseMelika. 58: 35-45.